Uvemvane olunemiqulu yephepha langasese | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Uvemvane olunamaphepha asendlini yangasese
DonluMusical | | Imisebenzi yezandla zekhadibhodi, Imisebenzi yezandla yezingane
Izimvemvane Ziyizilwane ezisetshenziswa kabanzi ekuhlobiseni amakamelo ezingane, imisebenzi, ubuciko futhi zihlobene kakhulu nezimbali.
Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi usetshenziswe kanjani kabusha amakhadibhodi amaphepha asendlini yangasese ukubenza babe uvemvane oluhle ongalusebenzisa emsebenzini wakho. Kwenziwe ngokushesha okukhulu futhi umphumela uyamangaza, kuhle ukukwenza ntambama kunemvula ekhaya noma ngempelasonto.
1 Izinto zokwakha uvemvane
2 Inqubo yokwenza i-Butterfly
Izinto zokwakha uvemvane
Imiqulu yamakhadibhodi ephepha langasese
Izikhonkwane zekhanda eziyindilinga ezinemibala
Abahlanza amapayipi anemibala
Inqubo yokwenza i-Butterfly
Ama-Crushes kancane ithubhu lamakhadibhodi.
Ngosizo lombusi, yenza amamaki we 1 cm kuwo wonke umqulu.
Joyina le migqa ngepensela nerula bese uyisika. Kufanele bahlale Izingcezu ezine ezilinganayo.
Namathisela lezi zingcezu ngababili njengasesithombeni bese uwajoyina kancane nge-engeli.
Beka a i-pom pom kanye nocezu lokuhlanza amapayipi okuzoba ngumzimba wovemvane. Ekhanda izinzipho izikhonkwane ezimbili okuzoba yizimpondo.
Namathisela imibuthano yerabha emhlophe emhlophe ebusweni ezoba amehlo bese udweba amachashazi amnyama anomaka.
Bese ubeka emaphethelweni amaphiko 4 eva iringi tindilinga ongayenza ngezivivinya nokuhlobisa okuthile, okuthanda kakhulu, ngaphakathi kwale mibuthano. Ngikhethe lezi zibalo ezibukeka njengamalanga, kepha ungakhetha izinhliziyo, imibuthano emincane, izinkanyezi ...
Futhi unovemvane wethu. Kungumsebenzi ophelele wokwenza nezingane. Ngiyethemba uyithandile futhi uma kunjalo, ungakhohlwa ukungithumela isithombe nganoma yimaphi amanethiwekhi wami wokuxhumana nomphakathi.
Uma uthanda ukusebenzisa kabusha imiqulu yamaphepha yangasese, ngiphakamisa lo omunye umqondo wegundane elincane elihlekisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Uvemvane olunamaphepha asendlini yangasese
Ungayenza kanjani ikati ngeFimo noma ubumba lwe-polymer
Bhukumaka amakhasi wangokwezifiso